EZ Tube Popup Ratidza Fekitori | China EZ Tube Popup Ratidza Vagadziri uye Vatengesi
Iyo yakakomberedzwa machira popup kumira imhando yezvinhu zvitsva zvekuratidzira chishandiso chinogona kuendesa meseji yako nenzira yakashongedzwa. Yakanakira kushandiswa pazviratidziro zveshambadziro, kuratidzira kana kumashure kwekutengesa, jira popup stand iri nyore kuungana netsika yakadhindwa jira graphic.
Yakakurumbira yekudhinda nzvimbo inokutendera iwe kunakirwa hombe brand brand. Iyo tension jira chubhu inoratidzira neyeakasarudzika graphic inonyatso kuoneka pakati pechaunga.
Yakarongedzwa nehukuru hukuru uye yakasarudzika chimiro, iyo yakakomberedzwa tension jira inoratidzira inogona kugara ichikupa iwe ziso-rinobuda uye mweya unotora-unotora, iyo inogona kuve iko pakarepo kuve inotarisisa mune ruzhinji.
Iyo nhanho uye dzokorora kumashure inokubatsira iwe kugadzira yakanaka pikicha yekumashure. Nezvo, iwe unogona kusimudzira yako mhando uye bhizinesi kune inotevera nhanho. Nhanho yedu uye yekudzokorora kumashure mabhendi akakodzera mafirimu ekutanga, zvitsva zvigadzirwa kuvhura zviitiko, mabiko ekuberekwa kana chero kwaunoda logo yako kumberi nepakati.
Inoratidzira yakasarudzika saizi yekudhinda uye yekugadzira dhizaini, machira popup anomira anowanzo shandiswa sekuratidzira madziro kana kumashure kumashure. Hazvina mhosva kuti iwe unomisepi jira popup stand, mukati mezvitoro, pamberi pechitoro chako, kana pakuratidzira kwekuratidzira, iwe unokwezva kutariswa nekukasira kubva kune vanopfuura.
Iyo Yakatwasuka Fabric Banner Mira ine rinorema-basa base rinokutendera iwe kunakidzwa wakadzikama kuratidzwa. Zviri nyore kumisikidza uye zviri nyore kuchinja magiraidhi.